१६ बर्षिया युवती माथि कुनपा छमर्केमा सामुहिक बलात्कार, स्वबियु सभापति सहित ३ जना पक्राउ ! – ebaglung.com
१६ बर्षिया युवती माथि कुनपा छमर्केमा सामुहिक बलात्कार, स्वबियु सभापति सहित ३ जना पक्राउ !
२०७४ चैत्र १६, शुक्रबार १७:४७	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
महेन्द्र केसी, पर्वत, २०७४ चैत १६ । पर्वतको गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति सहित ३ युवा एक युवतीलाई सामुहिक बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।
बिहीबार राति कुश्मा नगरपालिका ४ छमर्के घुम्तीको एक होटलमा सामुहिक बलात्कार गरेको आरोपमा नेपाल बिद्यार्थी संघबाट निर्वाचित स्ववियु सभापति शिशिर क्षेत्री सहित ३ युवा पक्राउ परेका हुन् ।
पक्राउ पर्नेहरुमा कुनपा १ पाङ सहस्रधाराका क्षेत्री सहित कुनमा ५ मेलमिलाप चोकका सुजल श्रेष्ठ र फलेवास नगरपालिका ६ देविस्थानका सौगात शर्मा पौडेल रहेका छन् ।
उनीहरुलाई कुस्मा नगरपालिका ४ छमर्के घुम्तीस्थित न्यु सेवा गेष्ट हाउसबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकोहो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले दिएको जानकारी अनुसार बागलुङको चैते दशै मेला अवलोकन गरेर फर्किँदै गरेका दुई युवतीलाई हिँजो विहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि मालढुंगाबाट लिएर आएका श्रेष्ठ र पौडेलले गेष्टहाउसमा राखेपछि शिशीरलाई बोलाएका थिए । दिउँसै देखि खाजा खाँदै छमर्के स्थित न्यू सेवा गेष्ट हाउसमा बसेका दुई युवती मध्ये एक युवती भाग्न सफल भएकी र अर्की स्याङजा जिल्ला घर भएकी १६ बर्षिया युवतीलाई भाग्न खोज्दा खोज्दै समातेर जर्वजस्ती करणी गरेको बुझिएको प्रहरीले बताएको छ ।
प्रहरीले होटल मालिक नारायण भन्ने शेरबहादुर हमाललाई पनि अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ ।
भाग्न सफल युवतीले आफन्तहरुलाई खबर गरेपछि उनका आफन्तहरुले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरीले खोजतलास गर्दा सोही होटलमा तीनै जना युवाहरु सहित एक युवती सँगै बसेको अवस्थामा रङ्गेहात पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको हिरासतमा राखिएको जनाएको छ ।
पीडित युवती र घटनामा संलग्न युवाहरु बीच यस अघि कहीँ कतै पनि भेट तथा चिनजान नभएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पीडित युवतीका आफन्तहरुलाई बोलाएर जवरजस्ती करणी अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी नायव उपरीक्षक दिलिप घिमिरेले बताए । घटनामा संलग्न तीनै जना आरोपितलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
एसइई दिएका नवजागृति माबि तिलाहारका ८० जना विद्यार्थीको भविष्य जोखीममा